Wararka Maanta: Talaado, July 31, 2012-Majaajiliistihii Caanka ahaa ee Marshaale oo Muqdisho lagu dilay
Cabdi Jeylaani Marshaale
Marxuumka ayaa lagu dilay degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir oo uu deganaa, waxayna dad goob-joogayaal ah sheegeen in ay toogteen labo ruux. Marxuumka ayaa ku geeriyooday Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo dhaawac ahaan loo geeyay.
Marshaale oo ku caan ahaa majaaajillooyinka iyo ruwaayadaha maadda iyo qosolka leh ayaa wuxuu la shaqeynayay TV-ga Universal iyo Idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Sidoo kalena marxuumka waxaa uu horay ula shaqeeyay Idaacadda Shabeelle ee Magaalada Muqdisho.
Dilka Marxuum Marshaale ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo dhawaan magaalada Muqdisho dhaawac loogu geystay Wariye Maxamed Nuur Shariif iyo Wariye C/qaadir Cumar Cabdulle, kuwaasi oo dhaawacii loo geystay ka badbaaday.
7/31/2012 6:54 AM EST